#CPN(Maoist Centre)#CPN(UML)#Haribol Gajurel#Left Unity#Party Unification
एउटा विशाल नदी थियो बग्दाबग्दै सुक्यो ! झण्डा झुक्यो करोडौंको सिर पनि झुक्यो ! आक्रोशका मुठ्ठी उठाए सोझा मान्छेहरूले ! घृणापूर्वक भूईमा थुके देख्ने सुन्नेहरूले ! जीवनजलमा हलाहलझैं विष मिसाएर उत्सव मनाए गद्दारहरुले भारी बिसाएर ! एउटा विशाल नदी थियो ................! पहिरो खस्यो बस्तीमाथि कोलाहल थप्यो ! बाढी...बाँकी
#Balram Timalsina 'Biplab'#Flag#Poem
#Henary Veltmeyer#In Service of Imperialism#James Petras#NGO
#CPN(Maoist Centre)#CPN(UML)#Party Unification#Sahamati Patra
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सर्वसम्मत रुपमा संसदीय दलको नेता चयन हुनु भएकाे छ । अाज पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डको अध्यक्षतामा दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलकाे बैठक बस्याे र बैठकमा संसदीय दलको नेता तथा संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भयाे । बैठकमा समानुपातिक...बाँकी
#CPN(Maoist Centre)#Learder of the Parliamentary partyPrachanda
#CPN(Maoist Centre)#Left Alliance#Left UnityPrachanda
#CPN(Maoist Centre)#Education#Teachers AssociationPrachanda
« अगाडि 1 … 86 87 88 … 98 अर्को »